FAHATONTOSANA NY ADIDY MASINA : Nisaotra ny fahendren’ny Malagasy ny Praiministra Ntsay
Namerina hatrany ny fisaorana eram-po, eran-tsaina, ho an’ny vahoaka malagasy tamin’ ny fahamatorana sy ny fahendrena nasehony nandritra ny fotoam-pifidianana iray manontolo ny Praiminisitra Lehiben’ny governemanta ny 8 janoary lasa teo. 9 janvier 2019
Noderainy manokana tamin’izany ny vahoaka afaka naneho ny safidiny tao anaty fitoniana, na tamin’ny fihodinana voalohany izany, na tamin’ny fihodinana faharoan’ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika. Nanao ezaka izay faraheriny ity farany hampanjaka ny fitoniana teo amin’ny samy Malagasy ary tontosa tokoa izany noho ny fanehoana ny firaisankinan’ny tsirairay. Nandalo lalan-tsarotra tokoa i Madagasikara saingy novahana hatrany ny olana mba ho tafavoaka sy tsy hidirana any amin’ny Krizy vaovao hafa indray.
Niarahaba ny Filoha voafidy ihany koa
Miarahaba ihany koa ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara vaovao, Andriamatoa Rajoelina Andry, ny Lehiben’ny governemanta, ary mirary azy hahatontosa an-tsakany sy an-davany ny andraikitra miankina aminy, dia ny fanarenana sy ny fampandrosoana ny firenena. Isaoran’ny Praiminisitra manokana ireo mpikambana rehetra ao anaty fitandroana ny fahalemana, noho ny ezaka nataon’izy ireo nitazomana hatrany ny filaminam-bahoaka, sy niarovana ny olona sy ny fananany, taloha, nandritra, ary taorian’ireo fihodinana roa tamin’ny fifidianana.
Mampirisika ny vahoaka malagasy hanohy ny fiainana ao anaty fitoniana, hatramin’ ny fotoana hanatanterahana ny fianianan’ny Filoha vaovao ny Praminisitra, ary mihoatra noho io fotoana io aza, mba hahafahan’ny firenena mandroso amim-pitoniana ho amina dingana vaovao eo amin’ny tantarany.